Mpanamboatra sy mpamatsy voajanahary - Orinasa biodegradable China
Kisary mofomamy vita amin'ny hazo Sushi Moon Square
Ity Box Wood Cake Sushi Moon Cake Cake ity dia volavolan-tsika vaovao amin'ny 2021. Azo ampiasaina amin'ny Moon Cake, Sushi, Cake na vokatra fanomezana hafa izany. Ny akora ao anatiny dia misy ny hazo ambany, rakotra taratasy ary varavarankely PET mangarahara. Azontsika atao koa ny manova ny varavarankely PET ho varavarankely PLA., Izay hahatonga azy io biodegradable rehetra. Ankehitriny, izao tontolo izao dia hametra ny fampiasana plastika, koa raha mifidy an'ity karazana fonosana ity dia hanome fahafaham-po ny fangatahan'ny mpanjifa. Ary azonay atao koa ny manonta eo amin'ny boaty taratasy ivelany miaraka amin'ny sary famantarana na endrika hafa tadiavinao. Raha tianao izany dia mifandraisa aminay malalaka.
Kaontenera boaty Hamburger azo zezika tsy azo ovaina
Ny bioplastika dia fitaovana plastika novokarina avy amin'ny loharanom-pahalalana biomassa azo havaozina, toy ny tavy legioma sy menaka, zana-katsaka, mololo, zana-kazo, sawdust, fako ara-tsakafo, sns. sy kaontenera hafa) amin'ny alàlan'ny fampiasana zavamiaina bitika. Ny bioplastika dia matetika avy amin'ny derivatives siramamy, ao anatin'izany ny starch, cellulose, ary asidra lactic. Ny plastika mahazatra, toy ny plastika misy lasantsy fossil (antsoina koa hoe polymer petrobased) dia avy amin'ny solika na entona voajanahary.
Kaontenera misy tsiranoka katsaka roa
Ny plastika katsaka dia vita amin'ny asidra polylaktika (PLA), izay soloina plastika, vita amin'ny masiran'ny zavamaniry masirasira. Lasa safidy malaza amin'ny plastika nentim-paharazana izy io, izay nalaina avy amin'ny akora simika vita amin'ny solika.Vary saha: Ny fampiasana samihafa ny asidra polylaktika dia mety ho fomba iray hampihenana ny dian-tongan'ny karbonina tavela avy amin'ny plastika solika fôsily.
Takelaka sakafo misy tsiranoka azo ampiasaina tsy azo ovaina
Ny fonosana polystyrene dia tsy azo haverina ampiasaina ary tokony hatsipy any anaty fanariam-pako. Noho izany, izahay dia mikasa hampiasa fitaovana fonosana azo ampiasaina sy azo ovaina azo atao raha azo atao. Miaraka amin'ny fitaovana fonosana miorina amin'ny starch, ny vokatra dia voajanahary fa tsy fitaovana ambany kokoa raha ampitahaina amin'ny akora polymer synthetic. Ny lovia ara-tsakafo ahitra tsy azo ovaina biodegradable dia tsy vita amin'ny zana-katsaka ihany, fa koa latabatra azo ovaina novokarin'ny ovy, paty vary ary ny starch tapioca.
Kitapo misokatra PBAT PLA tsy azo ovaina
Ny fitomboan'ny fampiasana Biodegradable PBAT PLA Flat Open Bag dia midika fa misy fahalianana bebe kokoa amin'ny fampiasana loharanom-pahalalana mifototra amin'ny bio (azo havaozina) hanamboarana ireo vokatra ireo, na izany aza, tsy misy lalàna mifehy ny mpamokatra plastika amin'izao fotoana izao hanambara ny fisian'ireo loharano azo havaozina ao anatin'ny vokatra. Na eo aza izany dia misy fomba fitsapana eoropeanina, izay mamaritra fomba fikajiana amin'ny famaritana ny atin'ny karbaona miorina amin'ny biônika amin'ny monomer, polymère ary fitaovana plastika ary vokatra, mifototra amin'ny fandrefesana atiny 14C.
Kitapo miantsena plastika PBAT PLA tsy azo ovaina
Ny fako plastika dia vokarina manerana an'izao tontolo izao; Ny fako plastika dia ny ankamaroan'ny potipoti-dranomasina. Ho setrin'izany, ny indostrian'ny plastika dia manolotra karazana tsimok'aretina polymers biodegradable vaovao izay heverin'ny maro fa manome safidy hafa 'tia ny tontolo iainana' ho an'ireo polymer nentin-drazana; na izany aza, misy karazana terminolojia mampiahiahy sy fananana polymer mifandraika amin'izany. Ary afaka manome kitapo miantsena plastika plastika biodegradable PBAT PLA hamahana ny olan'ny fako izahay.